Kuyaziwa ukuthi ukusebenza kwe-umshini futhi ukusebenza isikhathi kuthinta yesondlo eyenziwa ngesikhathi nekhwalithi, kanye nokulungisa. Emuva e-USSR kwaba vedena uhlelo kokulungisa (okuhleliwe yesondlo zokuvimbela futhi ukulungisa). It kulawula umthamo imisebenzi ehlongozwayo, isikhathi ukuqaliswa zabo, ngaleyo ndlela asuse izizathu kunokwenzeka umshini ukungasebenzi. Ngakho, ezihlelelwe ukugcinwa zokuvimbela yelula ukuphila inkonzo amathuluzi futhi kuthuthukisa izinga lokuphila kwabo emsebenzini.
Kuhlelwe yesondlo ukukhalima semishini ukwakhiwa imishini
Ukusebenza indlela kuhilela eziyinkimbinkimbi imisebenzi ezakha kokulungisa uhlelo, injongo okuyinto nokuvimbela umonakalo ngenxa ukugqoka izingxenye. Amagadango akhethekileko ukuqinisekisa nokugcinwa emshinini ngamunye ngempela umi ngomumo, olwenziwa ukuqeqeshwa yabo.
Esikhathini kuhlelwe yesondlo ukukhalima ngenkathi usebenzisa imishini Kwenziwa noma njalo ngenyanga, noma ngokuvumelana lomumo elivunyiwe. Isondlo, olwenziwa njalo ngenyanga, enze ngesikhathi shift umsebenzi, e kwayo noma ukuphela. Isondlo, olwenziwa ngaphansi kohlelo, senzeka ngokuhambisana nezidingo ifektri indlela. Futhi ukuhlukanisa yesondlo olwenziwa ngesizini kabili ngonyaka, uma umshini sikulungele ukusebenza ebusika noma ehlobo isikhathi. Phakathi isitoreji umshini noma izinto zokuthutha ukuhlela yesondlo ukukhalima senzeka ngokuhambisana imibhalo nezimfuneko ukuthobela imithetho wokusebenza.
Izincwajana zemininingwane abashayeli noma zezisebenzi ingakwazi ukufeza ukulungisa yansuku zonke umshini, ehambisana nabo. Nokho, uma ukulungiswa imisebenzi yabo okuhleliwe akufakwanga ke umshini iya lwesondlo eyodwa emnyangweni lesondlo ukukhalima, lapho wahlanganyela ochwepheshe. Umsebenzi nsuku zonke izindlela yesondlo kuhlelwa, njengoba ziphoqelekile. Phakathi yesondlo, isakhiwo, imishini umgwaqo afeze uphethwe lobuchwepheshe, yokuhlanza, Lubrication, ukuhlolwa, ukulungiswa, sigqoka.
Kuhlelwe yesondlo ukukhalima zikagesi
amabhizinisi zezimboni ezinkulu zamanje kuhlelwe zokuvimbela ukulungisa Kwenziwa esitolo izisebenzi. ulungiswe ezinkulu kuphela kuwumsebenzi lapho ukwenza ngaphansi okuyinhloko izisebenzi ezinekhono. kwakhiwa Kanjalo amandla umsebenzi, eholwa shift umqondisi, iqondisa ezitolo ngoba izinto zikagesi neze unesibopho ukulungiswa yakhe ezincane lohleliwe. izitshalo Amandla ukuhlolwa imihubhe, emiseleni nezimayini bekwi-abasebenzi kagesi. Umsebenzi uyaqhubeka schedule. Uma kubhekwa ngasohlangothini ukukhubazeka Kutholwe kukhona ngemvume, basuke iqedwe, lapho ithuba livela.
Izinhlobo ukuhlela yesondlo ukukhalima
Njengoba isimiso kuhlelwe yesondlo yokuvimbela of imishini equkethe lezi zinhlobo yesevisi, ukunakekelwa kanye nokuqondisa ukuze ukulungisa kanye nokugcinwa izindlela, njenge:
yesondlo zamanje zokuvimbela imishini
amasheke isimiso ukuhlolwa
ukulungiswa okuhleliwe, aphakathi nendawo kanye elincane
yesondlo ezinkulu okuhleliwe
Ukulungisa umjikelezo ibizwa ngokuthi inkathi kuyoshaya phakathi ezimbili overhauls ezinkulu, okuhlanganisa ukuhlolwa eziningana kanye nokulungisa ezincane. ukulungiswa esincane okuthiwa kuhlelwe yesondlo lokuvikela, lapho iyunithi is phansi ukuqedela disassembly. Phakathi emayelana okuhleliwe yesondlo, phakathi kwesikhathi lapho indlela kancane zezikhali, yezingxenye ngamanye babhekana ukulungisa ezinkulu. Lapho elungisa ezinkulu kukhona esikhundleni izingxenye kanye izingxenye ukuthi sezigugile, iyunithi is zezikhali ngokuphelele, lilungiswe nokuba kushintshwe imininingwane eyisisekelo.
Ukuze uvimbele umonakalo, kudingeka ulandele imiyalelo mayelana nokunakekelwa usebenzise imishini ngendlela efanele.
Izidakamizwa "Klimadinon": yokusetshenziswa